FADLAN >> Marka Celine Dion uu kudhawaado aroos ee Las Vegas si uu u ciyaaro iyada oo ku dhuftay "Sababtoo ah waad i jeclayd" - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »FADLAN >> Markii Celine Dion uu kudhawaado aroos ee Las Vegas si uu u ciyaaro iyada oo ku dhuftay" Maadaama aad i jeclaatay "
WAXYAABO >> Marka Celine Dion uu kudhawaado aroos ee Las Vegas si uu u ciyaaro iyada oo ku dhuftay "Maadaama aad i jeclaatay"
WASAARADDA - Waa maxay walaac badan marka loo eego Celine Dion muuqaalka arooskeeda? Tani waa nasiib wanaag lamaane Maraykan ah, oo ku yiraa haa-da yar yar ee Las Vegas. Waa cajiib aad u fiican oo aan ku leenahay Jimmy Kimmel.
Iskuduwaha, ku dhaji khadka April 5, horeyba wuxuu gaari doonaa aragtiyo 900.000 ah. Jimmy Kimmel ayaa si qurux badan u soo dhaweeyay lamaane Maraykan ah oo ku biiray wadaad yar oo ku yaal Las Vegas. Filimidda aagga, hindisaha, oo caanka ku ah Atlantic, ayaa "diiwaan gashan", shirwad video, ururka shaqaalaha ee Kate iyo Jason. Ka dib markii la beddelay salaanta, iyo furitaanka kubadda, wuxuu ku dhawaaqay imaanshiyaha "artist" maxaliga ah ... Albaabku waa la furay, halkaa, Celine Dion wuxuu u muuqday muuqaalkiisa, inuu turjumo "Sababtoo ah i jecel ", tuubo caan ah oo la sii daayay 1996!
Isku xigxigga oo dhan:
Dhab ahaantii, fannaanku wuxuu ku yaallaa dhinacyada oo dhan! Kadib lix iyo toban sano oo deganaanshaha Las Vegas, Celine Dion, oo ah isaga oo u ogolaanaya kamaradaha TF1, "wuxuu bilaabay inuu ku noolaado" , ugu dhakhsaha badan ayaa booqan doona Waqooyiga Ameerika, ka hor intaanay tagin, bisha November, waxa uu 27e albaabkiisa u yaqaan "Courage". Hase-yeeshe, farageliyayaal, kuwaas oo aad u dareemaya dhuuban, halkaas oo aad u badan oo ku saabsan shabakadaha bulshada, heesaha ayaa ka jawaabaya: "Marnaba waan ka farxin karnaa qof walba (...) Waxyaabaha muhiimka ah waa in ay qaataan masuuliyad iyo dareemo wanaag (...) Ma da 'da'? Miyuu xaqiiqo ah in aan ogahay in ninkeygu uusan mar dambe xanuunsaneyn? Sababtoo ah ma haysto saddex carruur ah oo aan caadi ahayn? Miyay tahay sababta cutub cusub oo ii yimid? "Taageerayaasha Faransiiska, ogow in fannaaniintu ay boorsooyinkooda ku ridi doonaan Faransiiska 2020 ...
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lci.fr/insolite/mariage-a-las-vegas-celine-dion-chante-pour-les-maries-2117760.html
Nipsey Hussle xusuusta in lagu qabto Khamiista magaalada Los Angeles ee Staples Center - dadka
Frances Barrett, Giselle Stanborough iyo Sally Rees ayaa ku guuleystay abaalmarinta ugu qanisan ee farshaxanka haweenka
"Miyaydaan ahayn adiga oo hubsada afkaaga afkaaga? "
#go Go'aanka ah pakgne ficilka. - Halkan waa video
DADKA & LIFESTYLE3,100